Profaịlụ ụlọ ọrụ - Genzon
Akụrụngwa Genzon Novel
Ntọala guzosie ike na 2017, Shuyang Genzen Novel Materials Co., Ltd (nke a na-akpọ '' GENZON Novel Materials '') nọ n'okpuru nchịkwa GENZON nke na-ahụ maka njikwa ya na arụ ọrụ ya.
Genzon Novel Akụrụngwa bụ ụlọ ọrụ dị elu a ma ama na ngalaba nke ihe polymer, na-ejikọta ngwaahịa R & D, mmepụta na ahịa ya na ọtụtụ ngwaahịa na ụdị zuru ezu. Ihe nkiri polyester n'adabereghị ma mepụta ụlọ ọrụ nwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dị ka plasta alumini, obibi akwụkwọ, nchekwa kaadị, ọla aka, ntọhapụ, waya ọla ọcha na ọla ọcha, ihe nkiri kink, ihe mkpuchi mmiri, wdg n'ọdịnihu, ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịmụba ngwa nke ihe eji eme polyester ihe eji eme ihe. Ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere akara mmepụta polyester 18,000 ton, 4 German donier gbazee ihe nkiri mmepụta ngwa agha na ahịrị 1 na akara ụlọ. Ọ nwere mmepụta na ntọala R&D na Jiangsu na ebe ndị ọzọ.
N’ọdịnihu, Genzon Novel Materials ga-adabere n’echiche mba ụwa iji wuo akara China ma gbalịsie ike ịbụ onye ndu n’ime ụlọ ọrụ ihe ọhụrụ ahụ site na ijikọ uru ndị dịnụ, iwusi ihe ọhụrụ ike, na imepụta ihe ọcha na gburugburu ebe obibi.
Ekelebere Genzon Investment Group Co., Ltd (the “Genzon”) na Dec 2003. Ebe onye isi ya dị na Shenzhen, Genzon nwere ndị ọrụ 5,000 karịa na mba niile. N'itinye ya dika onye na-eweta oru maka ulo oru uzu elu, Genzon kariri itinye aka na ulo oru itumgbere ahia, mmepe nke ulo oru ulo ahia, iwulite oru na ulo oru ulo oru ndi ozo.
Nkwanye ugwu nke itinye ulo oru aka, Genzon meputara ebe ogwu, ihe ohuru na imeputa igwe eji udiri oru mmepe nke ikenye oke-ahia nke ahia. N'ime nke a, Welmetal na-agba mbọ n'ichepụta ya na R&D nke ngwaahịa ọla dị mma, ebe Genzon New Materials na-elekwasị anya n'ọhịa nke ihe ndị polymeric. Enwekwara otutu oru nkwuputa ego na uzo ahia Genzon. N'ihe banyere ọrụ na ịrụ ọrụ nke ogige ụlọ ọrụ mmepụta ihe, Genzon lekwasịrị anya na azụmahịa ya na Greater Bay Area, ma nwee onwe ya ugbu a ma na-arụ ọtụtụ ogige ụlọ ọrụ mmepụta ihe.
N'ime afọ iri gara aga, Genzon na-agbaso ebumnuche nke ịmepụta ihe dị iche iche dị egwu ma nyefee ya ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ nwere ntụkwasị obi kwesịrị ntụkwasị obi. Iji jiri ohere dị na oge nke nnukwu mgbanwe na nrụzigharị akụ na ụba na China, Genzon ga-akwado, ma na -emekwa ụlọ ọrụ ndị nwere nnukwu uru ma kwado mmepe mmepe site na ọfịs ya dị egwu na nnukwu ihe eji enyere ndụ aka. Genzon Group ewepụtala ọwa ozi na ogige ụlọ ọrụ na ndị bi na ya. N'ime ọtụtụ afọ, ọ mepụtara ụlọ ọrụ azụmahịa, ụlọ ọfịs, ndị bi na ya, ụlọ oriri na ọ clubụ goụ na golf, ma nweta uru na ahụmahụ na mmepe ụlọ ọrụ na njikwa ihe.
NKWUKWU NKWUKWU NA AKW .KWỌ
Otu isi R&D, nke onye dọkịta nyochachara na America, guzobere na Silicon Valley iji nweta teknụzụ ndị ụwa na-eduga.
Ntọala ule ihe nkiri a na-akọ ugbo na-enyere anyị aka ịhazi ihe ọhụrụ, na ọmụmụ ihe na nyocha
Teknụzụ na-emebi polyester rụrụ arụ, usoro ọgụgụ isi ụwa niile nke nwere onwe ya na teknụzụ ndị nwere ikike nwere ikike nke mpaghara 15 gụnyere China, US, Europe, Japan na Taiwan.
Nkwenye oru ngo nke nyocha nyocha nke azụmahịa nke Mpaghara Jiangsu na 2014
Ihe nrite nke abụọ na ikpeazụ nke asọmpi Innovation China na Ndumodu ndi Atọmaahịa - Novel Materials Industry in 2014
ỌR MAN ỌR.
Anyị nwere ndị otu ọkachamara, ahụmịhe na arụmọrụ dị mma iji kwalite mmepe ngwa ngwa nke GENZON Novel Materials na nyocha nke mmepe na mmepe, njikwa arụmọrụ, njikwa ahịa, njikwa ahịa na arụmọrụ azụmahịa na njikwa ya.
AKAPKỌ AK .KỌ
Nleta kwa afọ nke ihe ruru 180,000 na ụlọ ọrụ 110,000m2
Anọ imeputa ihe nkiri anọ nke Dornir na otu akara ule ụlọ
Ihe omumu ihe omumu n'okpuru 6S nhazi oru